Mogadishu Journal » Faah faahin qaraxyadii ismdaaminta oo maanta ka dhacay Muqdisho [Sawirro naxdin leh]
Faah faahin qaraxyadii ismdaaminta oo maanta ka dhacay Muqdisho [Sawirro naxdin leh]
Mjournal :– Inta la og-yahay 15 [Shan iyo toban ruux ] ruux oo isugu jirtay rayid iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay ilaa labo qarax oo ahaa weeraro ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay goob marxad ah oo ku taala agagaarka guriga hooyooyinka meel aan ka fogeyn maqaayada The Village.
Wararka laga hellayo goobta uu qaraxa ka dhacay oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen dadka ka badan 20 ruux ayaa sheegaya in markii hore uu qarxay gaari uu la socday qof natiis hure ah, kadib qof kale oo goobta ku sugnaa uu is qarxiyay.
Mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugnaa maqaayada The Village markii ay qaraxyadu dhaceen ayaa warbaahinta u sheegay in uu idhahiisa ku arkay meydadka ilaa toban ruux oo u badnaa sida uu hadalka u dhigay dad rayid ah.
Goobta ay qaraxyadu ka dhaceen waxaa markiiba gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya.
Warsame Max’ed Xassan [Joodax] ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka ee dhinaca nabad-galyada oo goobta tagay ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkan uu ahaa mid lagu doonayo in shacabka lagu laayo, isagoo intaa ku daray in la diidan yahay inay wadashaqeyni dhexmaro dowladda iyo shacabka.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegtay weerarkan waxaan uu ku soo beegmayaa xilli ay habeen ka hor ka dhaceen Muqdisho qaraxyo waaweyn oo geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac, taaso mas’uuliyaddiisa ay sheegatay Al-shabaab.
Shir looga hadllayo toosinta fahamka qaldan ee laga qaatay Diinta Islaam-ka oo saakay ka furmaya magaalada Muqdisho
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud oo si kulul u cambaareeyay qaraxyada ka dhacay Muqdisho